Maamulka Beled-xaawo oo ku baaqay in la qaboojiyo colaad beelaha ee degmada Mandheera ee Kenya – Radio Daljir
Maamulka Beled-xaawo oo ku baaqay in la qaboojiyo colaad beelaha ee degmada Mandheera ee Kenya
Agoosto 10, 2013 4:34 b 0
Mandheera, Aug 10, 2013 – Maamulada degmada Beled-xaawo ee Soomaaliya iyo kan degmada Mandheera ee gobolka woqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa jeediyey degniin ku socota beelo walaalo ah oo degan deegaankasi oo ku yaala xuduuda labbada wadan.
Gudoomiyaha degmada Beled-xaawo ee Soomaaliya ku taala xuduuda Kenya iyo Soomaaliya Maxamuud Axmed Bayxaani oo maanta war-baahinta la hadlay , wuxuu ?sheegay in dagaalada sokeeye ee ka dhacay deeganada ku dhow xuduuda ay yihiin kuwa saameyn ku yeelan kara gobolka oo dhan.
Maamulka Beled-xaawo wuxuu ku baaqay in laga hortago dagaalo ka dhaca Mandheera markale, waxaana ay sheegeen in ay ka xun yihiin isla markaasna ay ka damqanayaan, dagaal Beeledka saan saantiisa laga dareemayo Mandheera.
Mudane Bayxaani wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka hor-tagaan colaad ka soo if baxda gobolka oo ah mid deris ah, wuxuu ku cel celiyey in ay ku baaqayaan in laga hortago colaada beelaha ee Mandheera.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Puntland mudane Awaare oo shaaciyey in uu tartamayo (Dhegeyso)
Xubno ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya iyo madaxda Puntland oo ka wada-hadalay xiriirka (Dhegeyso)